Ngano dzeGalicia: Ngano dzenyika inoshamisa | Kufamba Nhau
Luis Martinez | 03/06/2021 10:20 | Spain maguta, tsika nemagariro, España
Ngano dzeGalicia dzinopindura kune hunyanzvi hwenzvimbo ine mazana emakore emakore. Mamiriro ekunze akasviba uye anonaya, mahombekombe ayo asina kuenzana uye mipata yayo yakadzika ine miti inozvikweretesa zvinoshamisira pakuonekwa kwengano uye nerima.
Naizvozvo, hazvisi netsaona kuti Galicia inzvimbo izere ngano nyaya. Vamwe vane midzi yavo mune mhute yenguva uye, zvinoshamisa, zvine hukama nenyaya dzakafanana dzakazvarwa pakati nepakati kuchamhembe kweEurope. Vamwe, kune rimwe divi, ndevechizvarwa vemo uye vanopindura kune vakachena Ngano dzemadzitateguru. Kana iwe uchida nyika yengano, tinokukoka iwe kuti uenderere mberi nekuverenga, sezvo isu tichizokuudza nezve dzimwe dzedzakanyanya kuzivikanwa uye ngano dzakakurumbira dzeGalicia.
1 Nhoroondo dzeGalicia: Inoshamisa inotaurwa yemuromo
1.1 Iyo Kambani Tsvene
1.2 Iyo Costa da Morte, tsime renhoroondo
1.3 Iyo shongwe yeHercules
1.4 Korona yemoto, ine hutsinye hwepakati nepakati
1.5 Chechi yeSanta María de Castrelos uye nengano yeiye mupfuri
1.7 Bako raMambo Cintolo
Nhoroondo dzeGalicia: Inoshamisa inotaurwa yemuromo
Idzo ngano zhinji dzeGalicia dzakapona kusvika nhasi dzakamira muyedzo wenguva nekuda kwekushamisa tsika yemuromo yenyika iyoyo. Nekuti vazhinji vanobva mutsika dzakakurumbira dzinopfuudzwa kubva kuchizvarwa kuenda kuchizvarwa kuburikidza nenyaya dzinotaurwa pahusiku hwehusiku pazasi pemoto. Asi, pasina kumwe kunonoka, isu tichaenda kukuudza nezve dzimwe dzengano idzi.
Iyo Kambani Tsvene
Pamwe ndizvo izvi, panguva imwe chete, iyo inozivikanwa ngano yeGalicia uye yakadzokororwa mumakondinendi mashanu. Zvakare kutaura, inoti mudungwe wevakafa unomhanya nemunyika dzeGalician husiku kunyevera nezvekufa kweramangwana. Pamberi pemudungwe unotyisa kudaro kunoenda chakakura chakadanwa chinonzi Stade uye chero munhu anozviona anofanira kuchitevera nechigadziko chemwenje uye negate.
Sezvatakakuudza kare, iyi ngano ine kuwirirana kwayo mune mamwe matunhu eEurope. Semuenzaniso, yakabatanidzwa kune Kuvhima Kwemusango o Mesnie hellequin yenyika dzeGerman. Asi hatifanirwe kuenda kure zvakadaro. Ngano dzakafanana dzinowanikwa mune dzimwe peninsular mythologies. Semuenzaniso, tinogona kutaura iyo Güestia muAsturias, iyo Kutya muCastile uye iye Corteju muExtremadura nedzimwe nyaya munzvimbo dzakasiyana.
Kune rimwe divi, senge chero yakanaka inotyisa ngano yakakosha munyu wayo, iyi zvakare ine nzira dzayo dzekurwisa mhedzisiro yekuona iyo Santa Compaña. Pakati pavo, gadzira muchinjikwa neimwe nzira, dhonza denderedzwa pasi uye pinda mukati uchipfuura kana kukwira nhanho yechikepe chengarava.
Iyo Costa da Morte, tsime renhoroondo
Iyo Costa da Morte
Sezvaunoziva, kuchamhembe kwakadziva kumadokero chikamu cheGalicia ndiyo Costa da Morte Costa de la Muerte, nharaunda ine zita rayo pachayo rinozvikweretesa kune hupo hwengano. Yekutanga yavo ndeyemunguva dzevaRoma, sezvo vaifunga kuti ndiyo yaimakadza iyo finis terraendiko kuti, kuguma kwenyika.
Ikoko gungwa rakatanga uye, sekutenda kwechiRoma, avo vakapinda mariri vakamedzwa, pamwe nemvura pachavo, kana nezvisikwa zvinotyisa. Pamberi pavo, maCelt ainamatira zuva munyika idzodzo.
Asi chokwadi ndechekuti kusango kwemahombekombe uye simba reAtlantic rine hasha zvakakonzera kuwanda kuputsika kwechikepe. Uye aya ndeimwe nzvimbo yakakwana yekuberekera ngano. Pakati payo, iwo emaguta engano eAkareti akavigwa nemvura, iwo ematombo anoshamisa kana evasande vanoporesa meigallo (ziso rakaipa).
Iyo shongwe yeHercules
Ndiyo yega imba yechiedza kubva panguva dzevaRoma inosara yakamira. Naizvozvo, ine zviuru zviviri zvemakore enhoroondo. Sezvaunonzwisisa, zvine musoro kuti ngano zhinji uye ngano nyaya dzakatenderedza shongwe.
Inonyanya kufarirwa ndeyekuti vagari ve Brigantium kana Breogan vaigara mukutya hofori Geryon, avo vaida marudzi ese emitero kubva kwavari, kusanganisira vana vavo. Vakatarisana nekusakwanisa kumukunda, vakakumbira rubatsiro kubva Hercules, uyo akamudenha kuti arwe uye akamukunda mushure mekukakavara kweropa.
Ipapo gamba rakaviga Geryon uye, pamusoro peguva rake, rakasimudza shongwe iyo yaakapfekedza korona netochi. Padyo padyo, nekuwedzera, akagadzira guta uye, sekudanwa kwaiitwa mukadzi wekutanga akauya kwariri Cruña, Hercules akatumidza musha mutsva zita La Coruña.
Imwe ngano nezve shongwe yeHercules inoti munzvimbo mune iyo Breogán tower. Uyu angave aive ane mukurumbira mambo weGalician anoonekwa mune ngano dzeIrish, kunyanya mu Lebor Gábála Érenn o Bhuku reIrish Kukunda.
Zvinoenderana nengano, Breogán angadai akasimudza shongwe iyi uye, kubva kumusoro kwayo, vana vake vaigona kuona nyika yakasvibira. Vachida kusangana naye, vakakwira ndokusvika pa Ireland. Muchokwadi, pazasi peTorongo yeHercules iwe unogona kuona nhasi chifananidzo chakatsaurirwa kuna mambo anozivikanwa, mumwe weakakura manhamba engano dzeGalician.
Korona yemoto, ine hutsinye hwepakati nepakati
Nhare yeMonforte de Lemos
Monforte de Lemos iri rimwe remaguta akakurisa muGalicia. Imwe yenyaya dzayo inotaura chaizvo kuti pakati pe castle yeguta uye Benedictine wemamongi weSan Vicente del Pino pakanga paine nzira yepachivande yepasi pevhu.
Imwe yenguva iyo Count of Lemos Akange asipo pamuzinda kuti azadzise kumwe kutumwa kubva kuna mambo, abbot wemamongi akatora mukana wekupfuura kushanyira mwanasikana wevatongi, waakatanga kudanana naye.
Paakadzoka, murume weLemos akaziva ndokukoka mupirisita kuti azodya. Asi panguva yemadhizeti, pachinzvimbo cheizvi, akamupa korona yesimbi inopisa, akaiisa pamusoro wake, ndokufa. Zvichakadaro nanhasi, padhuze nefonti yekubhabhatidza yechechi yemamonk, iwe unogona kuona guva remurombo, ane zita Diego Garcia.
Chechi yeSanta María de Castrelos uye nengano yeiye mupfuri
Chechi yeSanta María de Castrelos
Nhoroondo yacho ine kuti muguta reVigo re Castrelos akararama mupfuri kuti ndaipengeswa nerudo nazvo mukadzi wechidiki. Akanga atove zera repamberi uye yaive nguva yekutanga yaive yaitika kwaari. Akafunga ipapo kumupa dombo rakakura, asi musikana akazviramba.
Nekutongwa kwake kwakarasika, akasarudza kumutapa ndokumukiya mu smithy yake. Nekudaro, mukadzi mudiki akamukumbira kuti amurege aende kumass mazuva ese. Sezvo chechi yaive pamberi peshopu yake, murume akabvuma.
Zvisinei, meiga akashanyira mupfuri wesimbi kuti azivise kuti achakurumidza kufa uye kuti mudiwa wake acharoora mumwe murume mudiki kwaari. Akapofumadzwa nehasha, akanhonga simbi inopisa ndokuenda kuchechi kunosvibisa kumeso kwemusikana. Zvisinei, Mwari akange aine zvimwe zvirongwa. Nekukurumidza, akavhara musuwo wekupinda kutemberi kuti auchengetedze. Iwe uchiri kukwanisa kuona iyo yekumaodzanyemba facade yechechi nhasi neayo mukova wezvidhina.
Chechi yeSan Andrés de Teixido
Iyi diki parishi mudhorobha reCeruña Cedeira Iine hermitage icho chinhu chechinhu chekufambira. Pakati pevagari vemunharaunda chirevo ichi chakakurumbira «To San Andrés de Teixido it is de morto or that non foi de vivo» uye inopindura kune ngano yekuda kuziva.
Inodaro Musande Andrew Ndaiitira shanje Santiago, iyo yaitove chinhu chekufambira. Akaita chichemo chake kuna Mwari, uyo akasundwa neshungu yake. Saka akavimbisa kuti vanhu vese venyama vaizoenda mumudungwe kunzvimbo yake tsvene uye kuti, ani zvake anga asiri mupenyu, achazviita mushure mekufa kwake, akazvarwazve kuva mhuka.
Musiyano werungano urwu unoti San Andrés akapunzika nechikepe chake pamahombekombe aya uye kuti ngarava yakashandurwa ikave matombo ayo nhasi anoumba chiwi chidiki pamhenderekedzo inoshamisa yeCedeira. Zvakakatyamadza kuparara kwechikepe zvekuti Mwari akavimbisa musande kuti aizoshanyirwa munzvimbo yehermitage nevanhu vese.
Bako raMambo Cintolo
Tichapedzisa rwendo rwedu kuburikidza nengano dzeGalicia neiyi inosanganisira madzimambo ane moyo munyoro, machindakadzi madiki, varoyi vakaipa vanoita zvishuwo zvinotyisa nevakomana murudo.
Iyo King Cintolo Cave ndiyo hombe muGalicia, ine anopfuura anopfuura mazana matanhatu emamita mita pakureba. Zviri zvizere Mariña Lucense, kunyanya muparish ye Kupokana. Zvakanaka, maererano nengano, munguva dzekare, nzvimbo iyi yaive yakabudirira umambo hweBría uyo monarch yaive Bhandi.
Panguva iyoyo, aive nemwanasikana akanaka anonzi Xila uyo ainyatsodanana nejaya iri Uxío, aienderana naye. Kunyangwe aive asina kukudzwa, muchato pakati pevaviri uyu waive wabvumiranwa apo n'anga ine simba Manilan Akavhundutsira mambo nekugadzira huroyi hunopedzisa humambo hwake kana akasapa Xila semukadzi wake.
Asi Uxío aisada kuzvibvumira uye akauraya n'anga. Nekudaro, aive atogadzirira huroyi hwake uye, apo mudiwa akashinga paakadzokera kuBría, anga atonyangarika. Munzvimbo maakange ari, akangowana muromo webako. Akapererwa, akapinda mairi kutsvaga mudiwa wake uye haana kubuda zvakare.
Mukupedzisa, isu takakuudza imwe yeiyo ngano dzeGalicia Zvimwe zvinozivikanwa. Asi kune zvimwe zvakawanda zvatichasiya, pamwe, kune imwe chinyorwa. Pakati pavo, iyo ye Pontevedra hwaro, iyo ye mount paralaia, iyo ye chishamiso cheBouza kana izvo zva Gomo Pindo. Zvese zvakakomberedza Galicia zvemashiripiti uye zvinonakidza, saka kana uchikwanisa, usarasikirwa nemukana wekutizira kune dzimwe nzvimbo dzatataura uye unakirwe nerunako rwe kushanya kwekumaruwa munzvimbo iyi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kufamba Nhau » Getaways Europe » España » Ngano dzeGalicia
Mafirimu ekuona usati waenda kuParis
Mishonga yekuenda kuBrazil